I-Rural Mountain Cottage "Indlu yeeMpungutye"
Indlu encinci kwaye igqitywe kakuhle ngamatye kunye neenkuni iikhilomitha ezimbalwa ukusuka eCollesano, entliziyweni yepaki yengingqi yaseMadonie. Bonke ukufudumala kwekhaya lentaba yokwenyani, ukuhamba okumangalisayo kwindawo engqongileyo, i-oki kunye nemithi ye-beech, iimbono ezingenakulibaleka.
I-cottage ibekwe kwiikhilomitha ezimbalwa ukusuka kwidolophu yaseCollesano (PA), entliziyweni yentlambo enkulu elawulwa ziintaba kunye nemithi ye-oki kunye ne-beech. Ummandla B wePaki.
Sichitha ixesha elide lonyaka sikwisiza esilawula ifama, ngoko ke sihlala sinxibelelana neendwendwe ukuze sifumane iingcebiso ngeendawo esinokuzindwendwela kunye nohambo olungcono esinokuthi lwenze kwindawo leyo. Kuyenzeka ukuba undwendwele inkampani kwaye ubone iindlela ezilandelwayo zokuzalanisa kunye nokulima, ziphefumlelwe zizithethe zamandulo zasekhaya.
Ngoku thatha imizuzu embalwa ufunde ulwazi oluya kukwenza ukonwabele ukuhlala kwakho eCasa delle Volpi nangakumbi kwaye ethetha ngakumbi malunga nendlela esifumana ngayo le ndawo kwaye sijonge ukwabelana ngayo nabanye abantu.
Musa ukuzisa izinto zeplastiki okanye izitya kunye nawe; silumke kakhulu ukunciphisa impembelelo yethu kwizinto ezisingqongileyo kwaye ngenxa yesi sizathu sibonelela ngendlu ixhotyiswe ngokupheleleyo. Ukuba unezidingo ezikhethekileyo okanye amathandabuzo, zive ukhululekile ukusibhalela kwaye siya kukuvuyela ukukunceda xa ufika kunye nokukunika lonke ulwazi oludingayo! Ngesizathu esifanayo, kuphephe ukuphatha iibhotile zeplastiki kunye nawe. Ke unokuwonwabela amanzi ethu entwasahlobo, ahlala ekhona kwiindwendwe zethu kwaye uya kuhamba kancinci!
Okokugqibela, sikholelwa ukuba kuluncedo ukukwazisa ukuba indlu ifudunyezwa ngama-radiator kunye neziko; Siyazi ukuba kulungele kangakanani ukuchitha iingokuhlwa kwindawo yokufudumala, kodwa ukusebenzisa iinkuni ezininzi kwaye ungathatheli ngqalelo ukuba ukufudumeza kunikwe amandla kwibhoyila yegesi kuthetha ukuchitha imithombo yamandla amaninzi kwaye ekugqibeleni kube negalelo kungcoliseko lokusingqongileyo. Qaphela ukusetyenziswa kweenkuni kunye negesi kwaye ukhumbule ukugcina zombini iinkqubo phantsi kolawulo!
Sichitha ixesha elide lonyaka sikwisiza esilawula ifama, ngoko ke sihlala sinxibelelana neendwendwe ukuze sifumane iingcebiso ngeendawo esinokuzindwendwela kunye nohambo olungcono…